Guardiola, Seri, Mourinho, Ghoddos, Donnarumma,Reus & Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala iibsiga – Kooxda.com
Home 2018 February Suuqa, Wararka Maanta Guardiola, Seri, Mourinho, Ghoddos, Donnarumma,Reus & Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala iibsiga
Tababaraha Kooxda Man City ee Pep Guardiola ayaa ogolaaday in uu heshiis cusub u saxiixo kooxda Man City isaga oo qalinka ku duugi doona heshiis ilaa 2021 ah isaga oo 3 milyan kor loogu qaadi doono mushahar uu haatan qaato (Mail).
Kooxda Man United ayaa kor u qaaday dadaalkii ay ku doonaysay saxiixa xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Nice ee Jean Michael Seri, 26 jirka reer Ivory Cost ayaa heshiiskiisa lagu bur-burin karaa lacag dhan 35 milyan oo euro (Mirror).
Xiddigaha Kooxda Man United ayaan wax dhibaato ah ka qabin shaxdii uu tababare Jose Mourinho Isticmaalay kulankii ay bar-baraha goolal la,aanta ah la galeen kooxda Sevilla champions league (Manchester Evening News).
Mustaqbalka Anthony Martial ee Man United ayaa ku jira shaki weyn xilli aan 22 jirka reer France loo soo bandhigin heshiis cusub xilli heshiiskiisa haatan uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedka dambe (RMC).
Kooxo badan oo premier League ah ayaa xiiso u muujiyay saxiixa weeraryahanka kooxda Ostersunds ee Saman Ghoddos kadib markii uu 24 jirku qaab ciyaareed cajiib ah soo bandhigay kulankii Arsenal ee Europe League (ESPN).
Kooxda Paris St-Germain ayaa isku diyaarinaysa in ay u dhaqaaqdo saxiixa goolhayaha kooxda Ac Milan ee Gianluigi Donnarumma inkasta oo uu da,yarku qalinka ku duugay heshiis ilaa 2021 ah xagaagii hore (AS).
Kooxda Inter Milan ayaa heshiis u soo bandhigtay xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda Lazio ee Stefan de Vrij kaas oo xor uga tagi doona dhamaadka xilli ciyaareedkan (Premium Sport).
Kooxda Ac Milan ayaa bartilmaameedsan doonta saxiixa xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee Marco Reus iyo xiddiga Real Madrid ee Dani Ceballos (Tuttosport).
Weeraryahanka kooxda Atletico Madrid ee Fernando Torres ayaa bartilmaameed u ah kooxda ka ciyaara horyaalka Shiinaha ee Dalian Yifang (AS).
Arjen Robben oo 34 jir ah ayaa kooxda Bayern Munich kula jirta wadahadalo heshiis cusub kaas oo uu xiddigu kaga fariisan doono kooxda (Kicker).